ယခုသင်သည်သင်၏ Pixel3တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင် 'Super zoom' mode ၏ Pixel2ကိုရရှိနိုင်သည် Androidsis
[APK] Pixel3ရှိ Google Pixel2၏ 'Super zoom' ကိုရရှိရန်
သင့်တွင် Pixel2ရှိပါကယခုသင်၌ကံကောင်းပါစေ သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင် Google Pixel3၏ 'Super zoom' ရှိနိုင်သည်။ Optical quality နှင့်ကိုက်ညီရန် software ကိုဆွဲယူသော zoom တစ်ခုနှင့်၎င်းသည် G သည်အခြားပြိုင်ဘက်များထက်အခြားအဆင့်တွင်ရှိနေခြင်း၏နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဘက်တွင်ရှိသောမျက်ကပ်မှန် ၃ ခုသို့မဟုတ် ၄ ခုပါသောလက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်ပါဝင်သည်။
Super zoom ရောက်ရှိလာသည် Pixel3နှင့်အတူ'Night sight' ကဲ့သို့ညဥ့်နက်သည့်အရာဖြစ်သည် သင်ပင် flash ကိုဆွဲထုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံများအတွက်။ Google ကဤကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်အခြားသူများအပေါ်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောနိုင်သည်။ သင့်တွင် Pixel2ရှိပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော APK အားဖြင့်သင် Super zoom mode ကိုစမ်းသုံးနိုင်ပါပြီ။
1 အားလုံးဆော့ဖ်ဝဲ, ဟုတ်
2 Google Pixel3တွင် Pixel2၏ 'Super zoom' ရှိရန်
အချို့က Pixel3၏ညမြင်ကွင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြသည်။ အရာ၏ကျနော်တို့ပြီးသားအတိမ်အနက်အတွက်စကားပြောခဲ့ကြသည်, Mate 20 ၏ညဉ့်အခါလည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသော်လည်း G. အောင်မြင်မှုနှင့်လုံးဝနီးပါးမရှိပါ။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတစ်ဆင့်ဤအံ့ဖွယ်တိုးတက်မှုများကိုသင်ရရှိသည်။ ကွန်ပျူတာဓာတ်ပုံနှင့် algorithms သူတို့ဟာ Google က၎င်း၏ Pixel3နှင့်အတူပြုလုပ်သောကျွမ်းကျင်သောကစားနည်းတွင်အရေးကြီးသောကဒ်ပြားကိုကစားသည်။
Super zoom သည်အရည်အသွေးမြင့် zoom ရရှိရန်တွက်ချက်ခြင်းဓာတ်ပုံနှင့် algorithms ကိုအသုံးပြုသည် ချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုမြင်နိုင်။ Google သည် Pixel3၏တင်ဆက်မှုတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအရ၎င်း modes များအားကျန် Pixel အကွာအဝေးသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ တရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းမရှိသေးသော်လည်း XDA Developers ၏အသင်းဝင် APK ၏ကျေးဇူးကြောင့်၎င်းကို Google Pixel2တွင်စတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Super zoom တွင် software အသုံးပြုသည် ဖုန်းကိုစွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများ အံ့သြဖွယ် zoom ကိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်လောက်အောင်တည်မြဲသောလှုပ်ရှားမှုသည် Pixel3၏ကင်မရာအက်ပ်သည်ချုံ့ချဲ့ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်မြင်ကွင်းသို့ချဉ်းကပ်သောအခါအာရုံမမြင်သာသောမြင်ကွင်းများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။
Google Pixel3တွင် Pixel2၏ 'Super zoom' ရှိရန်
ဒီတော့အခု သင်၏ Google Pixel2တွင် Super zoom ရှိနိုင်သည်:
download လုပ်ပါ APK: Google Pixel3ကင်မရာ APK.
အခြား APK တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် Super Zoom နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များရှိလိမ့်မည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိသော developer များစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် XDA ဖိုရမ်များ ဤကဲ့သို့သော APK များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Super zoom စနစ်အပြင် Pixel3ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းအပြင် ဒါ့အပြင်ဒီအားသာချက်များကိုကမ်းလှမ်း သင့်ရဲ့ Pixels တွင်မရှိပါ
ယခု Google Pixel (၂ မပါ) နှင့်အတူ သင်ပုံတူပုံကိုသုံးနိုင်သည်သာလူ့မျက်နှာပေါ်မှာပေမယ့်။
mode ကို ညဥ့်မွ ၎င်းသည်မည်သည့် Google Pixel တွင်မဆိုရရှိနိုင်သည်။
Night Sight တွင် manual focus ခလုတ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
HDR + ဆက်တင်ကိုထည့်သွင်းထားသည်
Pixel2မှာဒီအားသာချက်တွေရှိတယ် ထည့်သွင်းထားသည်
Photobooth activated ။
ရွေးချယ်မှုများ FPS အတွက် ဗီဒီယိုများ: အော်တို၊ ၃၀ နှင့် ၆၀ FPS ။
H265 နှင့် HEVC encoding အကြားပြောင်းပါ။
စူပါ Res မှန်ဘီလူး.
အသစ်တိုးတက်လာသော HDR + mode ကို။
ဤအားသာချက်များအားလုံးနှင့်သင်သည်ယူရို ၅၀၀ မှ ၆၀၀ ကြားရှိသည့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ၀ ယ်တော့မည်ဆိုပါက၊ Pixel2ကိုကြည့်ပါ ဂူဂဲလ်မှ၎င်းသည်ကြီးမားသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့်အပြင်အခြားအဆင့်ရှိဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Samsung, Apple, Huawei စသည့်အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီများကသူတို့၏ဖုန်းများသည် Pixels ထက်ရုပ်ပုံများပိုကောင်းသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သာ ရှေ့ကင်မရာဖြင့်ဤအုပ်စု selfies ကိုကြည့်ပါ.
သင့်မှာ Google Pixel2ရှိရင်အခုလုပ်နိုင်ပါပြီ သင့်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ“ Super zoom” mode ကိုအသုံးပြုပါ သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်သင်တစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးသည့်ဓာတ်ပုံများကိုချဲ့ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ မှန်ဘီလူး ၂ ခုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမဆို၊ Pixel2သို့မဟုတ် Pixel3မျှမလိုအပ်ပါ။ pinch အမူအရာနှင့်အတူချဲ့ထားသောထောင်ပြီးကဲ့သို့ပျော်မွေ့ပါ။ အဆိုပါမှော်သင်၏လက်၌ရှိ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] Pixel3ရှိ Google Pixel2၏ 'Super zoom' ကိုရရှိရန်
"My WhatsApp" သို့စာတိုပေးပို့နည်း